အမေးများ မေးခွန်းများ - Myanmar Web Designer (MWD) Co., Ltd. အမေးများ မေးခွန်းများ - Myanmar Web Designer (MWD) Co., Ltd.
(၁) Website အပ်သည်နှင့် ငွေတစ်ခါတည်း ပေးချေရမှာပါလား?
ငွေပေးချေရာတွင် (၂) ကြိမ်ခွဲပေးနိုင်ပါသည်။စရံငွေ (စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ၏၅၀%) ကိုအလုပ်အပ်သည့်သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးချိန်တွင် ပေးချေရပါမည်။ကျန်ငွေအားလုံးကို website ပြီးစီး၍အွန်လိုင်းပေါ်လွှင့်တင်သည့်အချိန်တွင် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၂) Website အသုံးပြုနည်း / ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်နည်းကို သင်ပေးပါသလား?
CMS Package ယူထားသော website ပိုင်ရှင်များအားဝက်ဘ်ဆိုဒ်အတွင်းရှိစာသားများ၊ပုံများကိုကိုယ်တိုင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနည်းအတွက်အလွန်နားလည်လွယ်သော Video Recording ဖိုင်များပေးအပ်ပါသည်။ နာမလည်သည့်အပိုင်းများကိုလည်း မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
(၃) ရှိပြီးသား website ကို maintenance လုပ်ပေးပါသလား? ဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ? ဘာတွေလိုအပ်လဲ?
ရှိပြီးသား website ကိုလည်း maintenance လုပ်ပေးပါတယ်။တစ်လချင်း Maintenance လုပ်လို့ရသလို ခြောက်လ Maintenance contract နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်။လုပ်လိုတဲ့အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်း ဈေးနှုန်းတွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်မှာကတော့ website admin အကောင့်နဲ့ FTP account ဒါမှမဟုတ် cPanel account ရှိဖို့လိုပါတယ်။
(၄) နှစ်စဉ်ကြေး ထဲမှာဘာတွေပါလဲ?
Domain, Hosting, Webmail အပြင်အခမဲ့ website ပြုပြင်ခြင်း၊ တစ်နှစ်စာလုံး website ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးခြင်း၊ website လစဉ် Backup လုပ်ခြင်း နှင့် တစ်နှစ်ပါတ်လုံး Customer support လုပ်ပေးခြင်းများပါဝင်ပါတယ်။
(၅) Website နှစ်စဉ်ကြေးကိုမည်သို့တွက်ချက် ပေးဆောင်ရမည်နည်း?
Website သက်တမ်းကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်နေ့မှစတင်ရေတွက်ပါသည်။ MWD မှ Website သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်ကို (၁) လကြိုတင်၍အကြောင်းကြားပေးပါမည်။ နှစ်စဉ်ကြေးကို သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမှီတစ်ပတ်ကြိုတင်၍ ပေးဆောင်ရပါမည်။
(၆) Website/Webmail အတွက်လစဉ်ကြေးနဲ့လား? နှစ်စဉ်ကြေးနဲ့လား?
(၇) Website နှင့် ဒေတာလုံခြုံရေးပိုင်းဘယ်လိုတာဝန်ယူပေးပါသလဲ?
Myanmar Web Designer ဘက်မှအလုပ်အပ်သူများ၏ website လုံခြုံရေးအတွက် website စလွှင့်တင်ကတည်းကစပြီး ဒေတာဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်အောင် online backup ရော offline backup ရောလုပ်ပေးထားပြီး Online backup ကိုလစဉ်ပုံမှန်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Website လုံခြုံရေးပိုင်းကိုတော့ coding ပိုင်းမှာကတည်းက Security ပိုင်းအတွက် သေချာရေးထားပြီး website လွှင့်တင်ခါနီးအချိန်မှာ MWD ရဲ့ QC team ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာများကို သေချာထပ်မံစီစစ်ပေးပြီးမှ လွှင့်တင်ပေးပါတယ်။ အလုပ်အပ်သူ၏ website တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျှင် MWD ဘက်မှ 24 နာရီအတွင်းအွန်လိုင်းပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Website Downtime မရှိသလောက်ရှားပါးပြီး 99.9% အထိအာမခံပါတယ်။
(၈) Website တစ်ခုအပ်မယ်ဆိုအချိန်မည်မျှကြာနိုင်ပါသလဲ?
ပုံမှန် Website Package များအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း (၁) ပတ်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရေးခြင်း (၂) ပတ်မှ (၃) ပတ်၊စုစုပေါင်း (၁) လခန့်သာကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ Customized Package များအတွက် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ တစ်လမှနှစ်လအထိကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။အလုပ်အပ်သူထံမှ ဒေတာပေးရန်ကြာမြင့်ချိန်မပါဝင်ပါ။
(၉) MWD ၏ အားသာ ချက်က ဘာတွေဖြစ်မလဲ?
(၃) Website quality ကောင်းခြင်း
(၄) ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခါမှာ စိတ်ရှည်ခြင်း
(၅) Website ကိုအလွယ်တကူ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နိုင်ခြင်း
(၆) Response မြန်ခြင်း
(၇) Customer များထံမှ ကောင်းမွန်တဲ့ Feedback များရရှိထားခြင်း
(၁၀) MWD ကို ဘာကြောင့် ယုံကြည်သင့်လဲ?
Myanmar Web Designer (MWD) Co., Ltd. ဟာ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ Company ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အရည်အသွေးကို အစဉ်တစိုက်ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့် လက်ရှိတွင် လုပ်ငန်းပေါင်း ၆၀၀ ကျော် တို့၏ အားပေးနှစ်ခြိုက်မှုကို ရရှိထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းများအားလုံး အင်တာနက်ပေါ်တွင် **အောင်မြင်စွာ** လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်နိုင်ရမည် ” ဟူသော MWD ၏ ရည်မှန်းချက်အရ Customer များ၏ လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှု ရရှိစေရန် အထူးဦးစားပေးအလေးထားပြီး ဆောင်ရွက်ပေးနေလျှက်ရှိပါတယ်။
Copyright © 2012 - 2019. All rights reserved by Myanmar Web Designer